Bonaire dia mandray ny sidina amerikana miverina ary mandefa hetsika ara-pahasalamana manerana ny nosy
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Bonaire dia mandray ny sidina amerikana miverina ary mandefa hetsika ara-pahasalamana manerana ny nosy
Amin'ny 5 Jona, Bonaire dia handray ny fiverenan'ny serivisy sidina tsy miato amin'ny American Airlines sy Delta Airlines avy any Miami sy Atlanta, izay manamarika dingana iray lehibe ho an'ny nosy.
Ny famerenana amin'ny sidina dia valin'ny fangatahana mafy.
Bonaire dia nanampy ny fisian'ny fitsapana antigen haingana ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Flamingo hanampiana ireo mpandeha hanaraka ny kaonty fitsapana COVID-19 any amin'ny nosy ankehitriny.
Ny fitsapana eo an-toerana dia hahasoa ireo mpandeha miverina any Etazonia ihany koa satria efa vonona ny valiny ao anatin'ny 15 minitra.
Aorian'ny fiatoana kely amin'ny asa mandritra ny areti-mandringana dia hanohy ny sidina alarobia sy asabotsy indroa isan-kerinandro ireo zotram-piaramanidina roa ireo. Ny vaovao dia tonga ho valin'ny fangatahana mafy avy amin'ireo mpitsidika amerikana maniry mafy ny hitsidika ny Blue Blue Destination sy ny avy eo an-toerana miandry fatratra ny fahatongavany.
Ho fanomanana, Bonaire dia nanampy ny fisian'ny fanandramana antigen haingana ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenenan'i Flamingo hanampiana ireo mpandeha hanaraka ny protokolon'ny COVID-19 misy ny nosy amin'izao fotoana izao, izay mitaky valim-panadinana antigen ratsy naterina tao anatin'ny 24 ora nahatongavanao sy fitsapana PCR ratsy, notanterahina tao anatin'ny 72 ora taorian'ny nahatongavanao. Ny fitsapana eo an-toerana dia hahasoa ireo mpandeha hiverina any Etazonia ihany koa satria efa vonona ao anatin'ny 15 minitra ny valiny.
Mba hahazoana antoka fa milamina ny mpandeha rehefa mitsidika, ny Travel Corporation Bonaire (TCB), iarahana amin'ny Bonaire Hotel and Association Association (BONHATA) ary ny Public Entity Bonaire (OLB), dia mandefa «Bonaire Friendly Safety Seal» ( Programa BFSS). Ny programa vaovao dia natao hanatsarana ireo paikady fiarovana efa henjana ao amin'ny nosy amin'ny alàlan'ny fanamarinana ireo orinasa eo an-toerana izay mahafeno ny fenitra takiana voalaza ao amin'ny programa ofisialin'ny BFSS.
Mba hahazoana ny BFSS, ny orinasa dia mila manaraka ny fombafomba sy politika marobe ao anatin'izany ny programa fiarovana, fahasalamana ary fanadiovana, ny famitana ny fanadihadiana lalina ary ny fizahana ifotony ataon'ny mpiasa efa niofana. Raha ekena, ny orinasa dia hahazo ny tombo-kase volamena ofisialy haseho eo an-toerana ary aseho koa ao amin'ny TourismBonaire.com, hahafahan'ireo mpandeha mamantatra mora ireo mpandray anjara mahay. Ny BFSS dia hanamarina orinasa isan-karazany ao anatin'izany: trano, trano filokana, fanofana fiara, mpandraharaha fizahan-tany, mpandraharaha rano, taxi, trano fisakafoanana, fivarotana sakafo, fivarotana antsinjarany, spa / salon.
"Miandry fatratra ny fiverenan'ireo sidina mivantana avy any Etazonia mankany Bonaire izahay ary nampiasa tamin'ity indray mitoraka ity hifantoka amin'ny fanatsarana ny tolotra aleha," hoy i Derchlien Vroklijk, talen'ny marketing ao amin'ny Tourism Corporation Bonaire. "Ireo fepetra ireo dia hiantoka ny tsy fitoviana amin'ny traikefa an'ny mpitsidika rehefa mandray ireo mpandeha amin'ny fomba azo antoka sy tompon'andraikitra ary voalamina isika."
Momba an'i Bonaire
Ny Destination Blue voalohany eto an-tany, voahodidin'ny morontsiraka nalaza noho ny fisitrihana scuba tsy manam-paharoa ary ny filentehan'ny masoandro mandavantaona, ny nosy Caribbean Caribbean Bonaire dia fialana amoron-dranomasina feno fahasambarana tototry ny tantara sy ny kolontsaina marevaka tahaka ny maritrano sy ny trondro tropikaly. Fantatra hatry ny ela ho paradisan'ny mpisitrika, ny fifantohan'i Bonaire vaovao amin'ny fankalazana ny ranomasina madio, ny natiora be dia be ary ny lova manankarena dia nanampy tamin'ny famolavolana ny tanjona ho lasa iray amin'ny haitraitra, kolontsaina ary fialamboly. Trano fisakafoanana mahaliana mihanitombo ankehitriny, ireo tia ny kintan'ny kintan'i Michelin dia nanangona safidy vaovao tsara ho an'ny sakafo any amin'ny nosy, na dia misy trano honenana avy any amin'ireo villa mihaja ka hatrany amin'ny hotely fivarotana bika amoron-dranomasina, dia manintona mpitsangatsangana be pitsiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Toeram-piarovana biby any Bonaire, valan-javaboary ary velaran-tany mahaliana, manomboka amin'ny morontsiraka masira ka hatrany an'efitra feno kaktosy dia tsy maintsy tsidihina ho an'ireo tia natiora. Miroborobo amin'ny hetsika ivelany toy ny kayak, ny fanaovana cave ary ny fanaovana surf amin'ny sidintsidina, io nosy io koa dia toerana mafana ho an'ireo mpikaroka fialamboly vonona hizaha. Rehefa mitombo hatrany ny toerana itodiana, ny ezaka fiarovana ny nosy dia mihoatra ny famerenan'ny vatoharan-dranomasina mahatalanjona, mba hampidirina amina fanoloran-tena amin'ny fampiasana maharitra ny harena an-dranomasina sy ny fikatsahana ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena noho ny feon'ny fieritreretana, mametraka an'i Bonaire ho iray amin'ireo Karaiba ny nosy tia namana indrindra.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'i Bonaire dia tsidiho azafady www.owusu-bonaire.com na araho amin'ny Facebook: www.facebook.com/Bonairetourism, Twitter: @BonaireTourism, Instagram: @bonairetourism sy YouTube: www.youtube.com/c/BonaireTourismTCB.